Guri qayb ahaan la leeyahay - InfoFinland
Nolosha Finland > Deganaanshaha > Guri qayb ahaan la leeyahay
Qeyb-lahaanshaha guriga (osaomistusasunto) waa qaab wanaagsan oo aad ku iibsan karto guri aad leedahay, haddii aadan awoodin in aad si toos ah u iibsato guri. Waxaad marka hore qeyb ka iibsaneysaa guriga adigoo kiro kusii degnaanaya guriga. Kadibna guriga dib ayaad ka wada iibsan kartaa milkiyadiisa oo dhan.
Marka aad u guureysid guri aad qeyb ahaan leedahay, waxaad marka hore bixineysaa 10-20 boqolkiiba qiimaha guriga. Waxaad deyn ka dalban kartaa bangiga si aad u bixiso lacagtaan.
Markaas kadib waxaad guriga ku dagnaaneysaa kiro waxaadna bil weliba bixineysaa kirada guriga. Caadi ahaan waqtiga kiro bixinta waa 5-12 sano. Waxaad isla mudadaasi sidoo kale iibsan kartaa qeybo lahaansho oo dheeri ah, haddii aad sidaasi kula heshiisay cidda guriga dhistay.
Xiliga kiro bixinta marka ay dhamaato waxaad iibsan kartaa milkiyadda guriga oo idil. Markaas kadib waxaad leedahay guri caadi ah oo ka mid shirkadda saamileyda guryaha.
Guryaha qeyb ahaan la leeyahay waxaa lagu dhisay kaalmada dowladda. Markaas tusaale ahaan sharcigu wuxuu go’aminayaa mudada guriga lagu deganaan karo kiro, iyo sida looga noqon karo lahaanshaha giriga.
Waxaa sidoo kale jira qeyb-lahaansho ku dhisan maalgesshi madaxbanaan (vapaarahoitteinen osaomistusasunto). Markaasi dowladdu wax kalmo ah oo ay ka geysatay dhismaha guryahaasi ma jirto. Hadii aad iibsaneyseyd qeyb-lahaansho ku dhisan maalgashi madaxbanaan, sharcigu ma go’aaminayo markaasi mudada guriga lagu degnaan karo kiro ama shuruudo kale oo heshiiska hoos imaanaya.
Sidee loo heli karaa guriga qayb ahaan la yeelanayo?
Bulshooyinka hantiwadaaga ah ama shirkadaha dhisaya guryaha qeyb ahaan loo yeelanayo waxay wargeliyaan guryaha cusub iyo kuwa soo banaanaanaya. Waxaad macluumaadkaasi sidoo kale ka heleysaa xafiiska guryaha ee degmada. Waxaad ku dalban kartaa guryaha qeyb ahaan loo leeyahay adigoo codsi dalab ah u qora qoloda guriga iska leh.
Hadii guriga qeyb ahaan loo yeelanayo lagu dhisay kaalmada dowladda, waad heli kartaa guriga, haddii
dhaqaalahaaga uusan aheyn mid buuran, iyo
in aadan haysan hanti aad u badan.
Haddii aad dalbaneysid guryaha sida gaarka ah loo maalgelinayo, dhaqaalahaaga iyo hantidaada midna lama xisaabinayo.
Macluumad la xiriira habka degenaanshada guriga qayb ahaan la leeyahayFinnish | Iswidish | Ingiriis
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 14.02.2019 Boggan war-celin ka soo dir